Karaiba: Misaotra anao ry Dr. King · Global Voices teny Malagasy
Karaiba: Misaotra anao ry Dr. King
Voadika ny 31 Janoary 2012 9:00 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Magyar, Español, srpski, বাংলা, македонски, English
Anio faha 16 Janoary 2012 no andron'i Martin Luther King Jr, andro izay ankalazan'i Etazonia ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'ny lehiben'ny vondrona mpitandro ny zon'olombelona. Nandray anjara tamin'izany ny mpitoraka blaogy Karaibiana, na tany an-tranon'izy ireo izany na tamin'ny alalan'ireo any ampielezana ary maromaro tamin'izy ireo no nizara ny heviny…
Nilaza ny fiantraikan'ilay lahatsoratra navoakan'i Dr. King mitondra ny lohateny hoe “Taratasy avy any amin'ny fonjan'i Birmingham” teo amin'ny fiainany ilay mpitoraka blaogy Jamaikana miompana amin'ny resaka literatiora antsoina hoe Geoffrey Philp, ary mipetraka any Miami, Florida. Nanambara izy fa ilay boky nosoratan'i Dr King farany dia nahitany lesona maromaro notsoahiny nandritra ny fotoana namakiany sy nampianarany ny lahatsoratr'i Dr King tamin'ireo mpianany eo an-dàlam-pazahoana diplaoma tany amin'ny Dade College tao Miami. Araky ny fahitany azy dia ny lahatsoratr'i Dr. King “no anisan'ny lahatsoratra mifono anatra indrindra tamin'ny taonjato faha roapolo, [izay] tsara vakian'ny tanora amin'ny fanazarany ara-tsaina.”
Mpitoraka blaogy Kiobàna ampielezana antsoina hoe Michael Pancier dia nanandratra “ilay famokarany rakitsary vitsivitsy sy horonan-tsary”, izay novokariny tamin'ny alalan'ny sary nalainy nandritra ny fitsangatsanganany tao amin'ny The King Center tao Atlanta, Georgia. Naneho ny hasarobidin'io andro io ihany koa ny mpiray tanindrazana aminy tao anatin'ny lahatsorany mitondra ny lohateny hoe, Hafatra avy amin'ireo Kiobàna an-tsesitany:
Ny adihevitra mikasika an'i Martin Luther King Jr. sy ny tsy fampiasana herisetra dia tena manan-danja tokoa ankehitriny satria manerana an'izao tontolo izao any Ejipta, Tonizia, Burma, Kioba ary any amin'ny toeran-kafa dia vondrona maro nivoitra no naka tahaka an'i Martin Luther King Jr. teo ampanaovana ny tolona tsy mampiasa herisetra. Tao Etazonia ny mpikatroka ao amin'ny Bodoy Wall Street dia naka tanteraka ny fomban'i Martin Luther King Jr. ary nikarakara hetsika nanamarihana ny tsingerintaona nahaterahany.
Tany amin'ny nosikely Virjiny tao Etazonia, namoaka horonantsary i Live De Life ahitana an'i Will Kimbrough maneho ilay “Ballad of Martin Luther King”,:
Tena nifanentana tsara amin'io fahatsiarovana azy io mihitsy ny seho an-tsehatra tamin'izany.
Farany, namerimberina nanoratra i Afrobella manao hoe “misaotra anao ry Dr. King…”misaotra anao amin'ny zava-drehetra”:
Efa 44 taona izao no nisy namono i Dr. King, ary vetivety dia adinon'ny olona fa olona manana ny hasiny i Dr. King. Lehilahy iray manan-bady ary koa manana fianakaviana. Lehilahy iray tsaroan'ny olona raha vao miresaka hetsika iray. Lehilahy iray tsy nitsahatra niasa, nandeha, nosamborina, sy niresaka hatrany mikasika ny filaminana, fifankatiavana, ary ny fahamarinana — ary koa nanao sorona ny ainy tamin'ny tolona ho amin'ny fitovian-jon'ny voloonkoditra rehetra.
Misaotra anao ry, Dr. Martin Luther King Jr. Raha tsy nisy anao dia tsy hay izay nanjo anay ankehitriny.
Ny “sarin'i Martin Luther King, Jr.”, no hajiantsary avy amin'i ﻿﻿ctankcycles, nahazoan-dàlana Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0) Creative Commons license. Jereo ireo sary rehetra navoakan'i ctankcycles ao amin'ny flickr.
Renivohitr'i Trinidad, voabahan'ireo hetsika manohitra ny famonoana ataon'ny pôlisy
Trinite sy Tobago 22 ora izay
Jamaika 6 andro izay